Inkunkuma yezoLimo Umgquba ojikajika
Inkunkuma Umgquba Turner
World edume umgquba Window Turner imfuyo co ...
CE umquba ukwenza umatshini imfuyo ihagu umgquba c ...
I-TAGRM yokujika komgquba ojikeleze indlovu yemfuyo ...
Umatshini wokwenza umatshini wokwenza imfuyo ...
Lixabiso umquba ukuxuba umatshini imfuyo indoda ihashe ...
Inkunkuma yasekhitshini umgquba wewindow ujike ikhitshini yenkunkuma yomgquba wokuxuba inkunkuma yokutya umatshini womgquba
I-M2600 yi-crawaler ekhitshini yenkunkuma yomgquba ojikajika nge-hydraulic. Umthamo yi-720 cbm / ngeyure efanayo nabasebenzi abali-100, inokwenza umgquba lonke uhlobo lwenkunkuma yasekhitshini. Ukuguquka rhoqo kubalulekile ukudibanisa umoya kunye nokufuma kwimfumba yomgquba oyibilisayo.
Inkunkuma yezolimo irayisi yomququ umjikelo wewindows wokujikisa isichumiso se-organice
I-TAGRM yomgquba ojikajika ujikeleze imfuyo yendlovu kumgquba kumyezo wezilwanyana
I-TAGRM M3000 yokuziqhubela ivili yendlela evulekileyo yenza imeko engcono ye-aerobic yezixhobo zezinto eziphilayo. Inokunceda ukukhuthaza izixhobo zokwenza umgquba ukuze zifumane ukucola okupheleleyo kunye nokukhawulezayo kwaye zibe sisichumiso esondlayo.
Umatshini we-CE womgquba owenzela imfuyo yehagu umgquba wejikajika
I-M3600 yintengiso eshushu yokuzihambisa i-windrow compost ye-TAGRM. Inokuzalisa ngokuzenzekelayo ukujika, ukuvusa, ukuxuba, ukutyumza kunye nokufaka ioksijini izinto zokwenza umgquba, kwaye inkqubo yokutshiza inokongeza amanzi kunye nokubila kwinto yokwenza umgquba.
Ixabiso lendawo yedada umgquba womgquba wokwenza umatshini wokuxuba imfuyo e-China
I-M4800 yintengiso eshushu kunye nomatshini odumileyo ojika umatshini eTshayina. Ngensimbi yayo eyomeleleyo yentsimbi kunye nezinto zokuhlanganisa, kunye nobungakanani bemveliso obuyi-2500 yee-cubic meter ngeyure, i-M4800 iba ngumatshini okhethwayo weziza ezivelisa umgquba.
Intsalela ye-beet intsalela yomatshini wokujikajika kwewindow kuthengiswa eVietnam
I-M4800 yenkunkuma yezolimo umgquba ujike umatshini wokwenza isichumiso somgquba wekhowa ngomatshini wokugalela umgquba
Umhlaba odume ngokuba ngumgquba ojikajika iworow kwimfuyo yenkomo
Umgquba ujike isichumiso somgquba esenziwe ngomatshini umatshini we-mushroom umgquba we-Window umatshini wokugalela umgquba
I-M2600 ngumatshini oguqula umquba ngokwakho. Isinyithi sayo esomeleleyo sentsimbi kunye nezinto zebandla zamkelwa lushishino lwezemigodi, olunezinto eziluncedo njengokuphila ixesha elide, ukulungelelaniswa ngokubanzi kumhlaba owahlukileyo, iindleko zokugcina eziphantsi, ukutshintsha ngokulula, njl.
Umatshini wokwenza umatshini wokuthengisa oshushu wemfuyo yenkunkuma
Umenzi wezinto ezijikajikayo ojikajika umgquba ujike ummoba bagasse umatshini wezichumiso zomgquba